【 သရျောစာ 】“ လျောတယျဆိုတာ လှယျတာမှတျလို့” | Opinion Leaders
ဒီခတျေက ‘လျော’ ခတျေ ။လျောခတျေဆိုလို ကရငျဘကျက ဖိုးတခတျေနဲ့လညျးမှားနဦေးမယျ။ ဟိုက ဘာသာရေး။ဒီက နိုငျငံရေး …တခွားစီ။
ပွောရဦမယျ။လျောခတျေရဲ့အစ လျောခတျေဦးပေါ့။ဒီကာလမှာ စြေးကှကျကိုခြုပျကိုငျထားတာက ဖကေံ ကောငျးတို့၊ ပေါကျစတို့ မောငျကာလုတို့ အာယုနဲ့ သာဓုတို့ ။ သူတို့က တဈကယျကို မွနျမာပွညျရဲ့ ကျောမာရှယျ လျောသမားတှေ။
သူတို့က လျောတယျသာဆိုတာ အရာရှိပိုငျးကလူတှေ ဖွဈဟနျမြားတဲ့ အတှကျ အပွငျကို ရုပျထှကျ မပွ ဘူး။ ဒီတော့ နတျဆိုးတို့ နောကျပေါကျ လျောသမားတှခေမြာ သူတို့ ဆီက မကျြနှာပွောငျတိုကျ လျောနညျး၊ အရှကျ မရှိ လျောနညျး ၊ မွကှေကျရ လုပျပိုငျခှငျ့ရ လျောနညျး စတဲ့ အမြိုးမြိုးအဖုံဖုံ လျောရညျပွညျဝ လျောကဝိကွီး တှေ ဆီက ပညာနို့ရညျ မရခဲ့တော့ လျောပမေယျ့ သိပျနာမညျမထှကျဘူးဖွဈတာပေါ့။
ဒီလိုလျောရညျ မပွညျ့ဝ၊ လျောဓာတျမ၀တော့ နာမညျကလညျးမကြျော။ဒီတော့ အခြီကွီးရမယျ့ လျော ကှကျတှေ မခြိတျမိဘဲ ပွုတျပွုတျပွုနျး လျောခြိတျဆကျတှလေောကျနဲ့ မစားလောကျတဲ့ လျောကှကျလေးတှဘေဲ ခြိတျမိတာပေါ့။
အခုတော့ ပေါကျစတို့ ဖကေံကောငျးတို့ ၊ဆိတျဖှားတို့လို လျောရညျပွညျ့ဝတဲ့ သူတဈယောကျကို ဒီဘကျ ခတျေမှာ ဘှားကနဲ့ တှလေို့ကျရတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲ လျောဆရာကောငျးတဈယောကျတှရေ့ပွီဟဲ့လို့ ဝမျး သာအယျလဲပေါ့..ပညာရညျမှီးပွီပေါ့..။
လျောအကွောငျးကို ဒီလောကျပွောနလေို့ မိတျဆှေ ပိုရနျကောလို့ တှေးမိမယျ..။မပိုပါဘူး မိတျဆှေ..။
လျောတယျဆိုတဲ့ ပညာရပျဆိုတာ လှယျတယျလို့ မထငျပါနဲ့ ….အခနျမသငျ့ရငျ လျောဆရာ တဈယောကျ ဟာ သပေေါကျတိုးတတျပါတယျ။
ဒါက လျောရငျးလျောရငျး ကိုယျ့ သပေေါကျ ကိုယျတိုးတတျတာကို တှရေ့တတျပါတယျ။
သဘောကတော့ သိုးယောငျဆောငျတဲ့ ဝံပုလှလေို့ လျောရငျးလျောရငျးနဲ့ စကားထဲက ဇာတိပွပွီး ဝံပုလှမှေနျးပျေါသှားသလိုပေါ့..။
၈၈ တုနျးကဆိုရငျ တခြို့ဆရာကွီးတှေ လူထုဟောပွောပှဲမှာ လူထုကိုတကျဟောရငျ “ -- ကို မထိနဲ့၊-- ကို မပွဈမှားနဲ့ လို့ ဘကျပငျးပွီး အလျောကောငျးလို့ စငျပျေါက ပွေးဆငျးရတာ၊ ဆှဲခခြံရတာတှေ၊ အသတျမခံရအောငျ ပွေးရတာတှေ အမြားကွီးပေါ့..။
ဒါလျောရညျမပွညျ့ဝလို့ ဖွဈတဲ့ သဘောပေါ့။
လျောတယျဆိုတာ ဘာလဲ..။သဘောကတော့ လျောတယျဆိုတာ ကိုယျဘကျပါအောငျ သိမျသှငျးပွောဆို နညျးပေါ့ကှယျ။
စဉျးစားကွညျ့ရငျတော့ ကောငျးသလိုလိုနဲ့ မကောငျးတဲ့ အလုပျပါ။ လျောပညာအစ ဘယျကစသလဲဆိုရငျ ရှေးခတျေက အောငျသှယျက စသကှဲ့..။အလျောပညာဟာ စတေနာအဓိကကှဲ။ ဒါပမေယျ့အသပွာ အဓိကဆို ရငျတော့ အလျောခံရသူအဖို့ ဘ၀ပါပကျြကရော။
အရပျထဲ မူးရှုးရမျးကား၊ စောကျကငျြ့ကတဈစကျမှမကောငျးပမေယျ့ အလျောကောငျးတဲ့ အောငျသှယျ ကောငျးနဲ့ တှရေ့ငျ အဲဒီအမြိုးသမီးအတှကျ ခကျြခငျြးဘဲ ဘျောဒီထု ရှိုငျးလိုကျတာနဲ့ မာစီဒီးဖွဈတော့မယျ ကားအမြိုးစားကောငျးတဈစီးကို ရတော့မလိုပေါ့။
အေး ယူလညျး ယူပွီးရော ….ဒီဘ၀မှာဘဲ အကုသိုလျမလုပျဘဲ ငရဲပွညျကို ဗီဇာမလိုဘဲ တနျး ရောကျပါရော…။ ဒီလို လျောတှရေဲ့ အစှမျးက ။
ဒါက အောငျသှယျလျောတာ။နိုငျငံရေးလျောဘီတှေ စှမျးပွီဆို တိုငျးပွညျပါပကျြကရော..။ကောငျးတဲ့ အစိုးရ၊ ကောငျးတဲ့ ခေါငျးဆောငျကို လျောမိရငျ ပွညျသူတှေ အဖို့ မထောငျးတာပမေယျ့ မကောငျးတဲ့ အဆိုးရ(အစိုးရ) ဖွဈမယျလူတှကေို အာရုံဝဝေါးပွီး ရှေးမိအောငျ အစုအဖှဲ့နဲ့ လျောကွရငျ တဈပွညျ လုံး ဒုက်ခရောကျ၊ ဒုက်ခဆိုး ကွုံရော..။
အောငျသှယျတှေ လျောလရှေိ့တဲ့ လကျသုံးစကားလို့ “ လူကလူကောငျးလေးပါဟယျ ။ အပေါငျး အသငျးမကောငျးလို့ ပကျြနတော ညညျးပွငျရငျ ရမှာပါဟယျ ” ဆိုသလို ..
“လူတှကေ လူကောငျးတှပေါဟယျ… မွငျသမြှခိုးတာရယျ လိုခငျြလောဘကွီးတာရယျ လေးဘဲရှိ တာပါ” လို ပွောသလိုပါဘဲ။အသပွာလျောဆရာတှရေဲ အလုပျက ဒီသဘောပါဘဲ။
လူမသုံးတဲ့ ပစ်စညျး၊လူမကွိုကျတဲ့ ပစ်စညျးကို လူထုမကွိုကျတဲ့ သူတှကေို လကျခံလာ‌အောငျ အယုံသှငျး ရောငျးခသြလိုပါဘဲ။
လျောတာက ဟိုးရှေးခတျေကတညျးကပျေါခဲ့တာဆိုတော့ ခုခြိနျမှာ ဒီပညာက အတျောလေးကို ကယျြပွနျ့နပေါပွီ ။
လျောပညာဆိုတာ နကျနဲတယျ၊ခကျခဲတယျ။ သငျယူလို့ မဆုံးဘူး။ အကှကျဆနျးတှကေ အမြားကွီး ခဏခဏ ပျေါတယျ။
ဒီကွားထဲ ရပေါကျရပေါကျအခှငျ့အလမျးကကွီးမားလှနျးအားကွီးရငျ မှေးရာပါ သန်ဓယေုတျပါရမီရှငျ အသပွာလျောဆရာလေးတှလေညျး ရုတျခွညျး (သိုးဆောငျးစကားအရဆို emerge) ပျေါထှကျလာတတျတယျ။
လျောဘီလောက ဆိုတာ တဈဆုံးမက ကယျြပွနျလှပါတယျ..။
လျောလောကမှာ ဆရာတဆူဖွဈဖို့ လိုကျမီဖို့ ဆိုရငျ ဖွတျလမျးက တဈလမျးဘဲ ရှိတယျ။ “ လြှာ “ကို ကောငျးကောငျးသုံးတတျမှ ရမယျ။ သဘောက “လြှကျ” ရမယျဆိုတဲ့ သဘောပဲ။တခြို့ လူသာငယျတာ ။ လြှာကို သုံးလှနျးအားကွီးလို့ လြှာခငျတောငျ ပွတျမထှကျ ဖွဈနပွေီ။
အလုပျဖွဈဖို့ လြှာ ရငျးရပမေယျ့ လျောဆရာတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍကလညျး သေးတာ မဟုတျဘူး။
ပွီးခဲ့တဲ့ အရပျပကျြဒီမိုကရစေီအရခွေုံခတျေက ဘဘကွီး နှားနို့လကျထကျမှာ ဆိုရငျ အိုဘားမားကို ဂငျြးထညျ့ဖို့ အမရေိကနျလို့ နိုငျငံကွီးကိုတောငျ သှားပွီး လျောဆရာ ငှားရတဲ့ အထိ လျောတခတျေဖွဈခဲ့သတဲ့..။
ဒီကတညျးက ဘဘကွီးတှလေညျး သူတို့ထုတျထားတဲ့ ဆောငျပုဒျဖွဈတဲ့ “ပွညျပအားကို ငမှထေိုး” ဆိုတဲ့ ဆောငျပုဒျကို အားနာပွီး ကိုယျထူကိုယျထ မွနျမာနညျးမွနျမာဟနျ ဒီမိုကရစေီကလုနျး လုပျသလို လျောတက်ကသိုလျ ထောငျပွီး မှေးမွူလိုကျတာ ခုဆို နယျပယျအစုံစုံမှာ မွနျမာဖွဈ လျောဆရာတှေ၊ လျောသရုပျ ဆောငျ တှေ၊ လျောအဆိုတျောတှေ လျောပညာရှငျတှေ၊ လျော နိုငျငံရေးသမားတှေ အမြားကွီး မှေးထုတျနိုငျခဲ့ပွီ။
ပွညျပအားကိုးစရာမလိုဘဲ ပွညျတှငျးဖွဈ လျောမြိုးဆကျကို မှေးထုတျနိုငျပွီလေ…
ကဲ…. အားရပါးရလျောလပွေီ။ လူမိုကျအဖှဲ့အားကိုးနဲ့ ….။
တဈတိုငျးပွညျလုံး ဘုရားတရားသာ တကွပတေော့…..။
ဒီခေတ်က ‘လော်’ ခေတ် ။လော်ခေတ်ဆိုလို ကရင်ဘက်က ဖိုးတခေတ်နဲ့လည်းမှားနေဦးမယ်။ ဟိုက ဘာသာရေး။ဒီက နိုင်ငံရေး …တခြားစီ။
ပြောရဦမယ်။လော်ခေတ်ရဲ့အစ လော်ခေတ်ဦးပေါ့။ဒီကာလမှာ ဈေးကွက်ကိုချုပ်ကိုင်ထားတာက ဖေကံ ကောင်းတို့၊ ပေါက်စတို့ မောင်ကာလုတို့ အာယုနဲ့ သာဓုတို့ ။ သူတို့က တစ်ကယ်ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ ကော်မာရှယ် လော်သမားတွေ။
သူတို့က လော်တယ်သာဆိုတာ အရာရှိပိုင်းကလူတွေ ဖြစ်ဟန်များတဲ့ အတွက် အပြင်ကို ရုပ်ထွက် မပြ ဘူး။ ဒီတော့ နတ်ဆိုးတို့ နောက်ပေါက် လော်သမားတွေခမျာ သူတို့ ဆီက မျက်နှာပြောင်တိုက် လော်နည်း၊ အရှက် မရှိ လော်နည်း ၊ မြေကွက်ရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ လော်နည်း စတဲ့ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ လော်ရည်ပြည်ဝ လော်ကဝိကြီး တွေ ဆီက ပညာနို့ရည် မရခဲ့တော့ လော်ပေမယ့် သိပ်နာမည်မထွက်ဘူးဖြစ်တာပေါ့။
ဒီလိုလော်ရည် မပြည့်ဝ၊ လော်ဓာတ်မ၀တော့ နာမည်ကလည်းမကျော်။ဒီတော့ အချီကြီးရမယ့် လော် ကွက်တွေ မချိတ်မိဘဲ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်း လော်ချိတ်ဆက်တွေလောက်နဲ့ မစားလောက်တဲ့ လော်ကွက်လေးတွေဘဲ ချိတ်မိတာပေါ့။
အခုတော့ ပေါက်စတို့ ဖေကံကောင်းတို့ ၊ဆိတ်ဖွားတို့လို လော်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ဒီဘက် ခေတ်မှာ ဘွားကနဲ့ တွေ့လိုက်ရတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ လော်ဆရာကောင်းတစ်ယောက်တွေ့ရပြီဟဲ့လို့ ဝမ်း သာအယ်လဲပေါ့..ပညာရည်မှီးပြီပေါ့..။
လော်အကြောင်းကို ဒီလောက်ပြောနေလို့ မိတ်ဆွေ ပိုရန်ကောလို့ တွေးမိမယ်..။မပိုပါဘူး မိတ်ဆွေ..။
လော်တယ်ဆိုတဲ့ ပညာရပ်ဆိုတာ လွယ်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ….အခန်မသင့်ရင် လော်ဆရာ တစ်ယောက် ဟာ သေပေါက်တိုးတတ်ပါတယ်။
ဒါက လော်ရင်းလော်ရင်း ကိုယ့် သေပေါက် ကိုယ်တိုးတတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
သဘောကတော့ သိုးယောင်ဆောင်တဲ့ ဝံပုလွေလို့ လော်ရင်းလော်ရင်းနဲ့ စကားထဲက ဇာတိပြပြီး ဝံပုလွေမှန်းပေါ်သွားသလိုပေါ့..။
၈၈ တုန်းကဆိုရင် တချို့ဆရာကြီးတွေ လူထုဟောပြောပွဲမှာ လူထုကိုတက်ဟောရင် “ -- ကို မထိနဲ့၊-- ကို မပြစ်မှားနဲ့ လို့ ဘက်ပင်းပြီး အလော်ကောင်းလို့ စင်ပေါ်က ပြေးဆင်းရတာ၊ ဆွဲချခံရတာတွေ၊ အသတ်မခံရအောင် ပြေးရတာတွေ အများကြီးပေါ့..။
ဒါလော်ရည်မပြည့်ဝလို့ ဖြစ်တဲ့ သဘောပေါ့။
လော်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ..။သဘောကတော့ လော်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဘက်ပါအောင် သိမ်သွင်းပြောဆို နည်းပေါ့ကွယ်။
စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ ကောင်းသလိုလိုနဲ့ မကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ လော်ပညာအစ ဘယ်ကစသလဲဆိုရင် ရှေးခေတ်က အောင်သွယ်က စသကွဲ့..။အလော်ပညာဟာ စေတနာအဓိကကွဲ။ ဒါပေမယ့်အသပြာ အဓိကဆို ရင်တော့ အလော်ခံရသူအဖို့ ဘ၀ပါပျက်ကရော။
အရပ်ထဲ မူးရှုးရမ်းကား၊ စောက်ကျင့်ကတစ်စက်မှမကောင်းပေမယ့် အလော်ကောင်းတဲ့ အောင်သွယ် ကောင်းနဲ့ တွေ့ရင် အဲဒီအမျိုးသမီးအတွက် ချက်ချင်းဘဲ ဘော်ဒီထု ရွိုင်းလိုက်တာနဲ့ မာစီဒီးဖြစ်တော့မယ် ကားအမျိုးစားကောင်းတစ်စီးကို ရတော့မလိုပေါ့။
အေး ယူလည်း ယူပြီးရော ….ဒီဘ၀မှာဘဲ အကုသိုလ်မလုပ်ဘဲ ငရဲပြည်ကို ဗီဇာမလိုဘဲ တန်း ရောက်ပါရော…။ ဒီလို လော်တွေရဲ့ အစွမ်းက ။
ဒါက အောင်သွယ်လော်တာ။နိုင်ငံရေးလော်ဘီတွေ စွမ်းပြီဆို တိုင်းပြည်ပါပျက်ကရော..။ကောင်းတဲ့ အစိုးရ၊ ကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို လော်မိရင် ပြည်သူတွေ အဖို့ မထောင်းတာပေမယ့် မကောင်းတဲ့ အဆိုးရ(အစိုးရ) ဖြစ်မယ်လူတွေကို အာရုံဝေဝါးပြီး ရွေးမိအောင် အစုအဖွဲ့နဲ့ လော်ကြရင် တစ်ပြည် လုံး ဒုက္ခရောက်၊ ဒုက္ခဆိုး ကြုံရော..။
အောင်သွယ်တွေ လော်လေ့ရှိတဲ့ လက်သုံးစကားလို့ “ လူကလူကောင်းလေးပါဟယ် ။ အပေါင်း အသင်းမကောင်းလို့ ပျက်နေတာ ညည်းပြင်ရင် ရမှာပါဟယ် ” ဆိုသလို ..
“လူတွေက လူကောင်းတွေပါဟယ်… မြင်သမျှခိုးတာရယ် လိုချင်လောဘကြီးတာရယ် လေးဘဲရှိ တာပါ” လို ပြောသလိုပါဘဲ။အသပြာလော်ဆရာတွေရဲ အလုပ်က ဒီသဘောပါဘဲ။
လူမသုံးတဲ့ ပစ္စည်း၊လူမကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကို လူထုမကြိုက်တဲ့ သူတွေကို လက်ခံလာ‌အောင် အယုံသွင်း ရောင်းချသလိုပါဘဲ။
လော်တာက ဟိုးရှေးခေတ်ကတည်းကပေါ်ခဲ့တာဆိုတော့ ခုချိန်မှာ ဒီပညာက အတော်လေးကို ကျယ်ပြန့်နေပါပြီ ။
လော်ပညာဆိုတာ နက်နဲတယ်၊ခက်ခဲတယ်။ သင်ယူလို့ မဆုံးဘူး။ အကွက်ဆန်းတွေက အများကြီး ခဏခဏ ပေါ်တယ်။
ဒီကြားထဲ ရပေါက်ရပေါက်အခွင့်အလမ်းကကြီးမားလွန်းအားကြီးရင် မွေးရာပါ သန္ဓေယုတ်ပါရမီရှင် အသပြာလော်ဆရာလေးတွေလည်း ရုတ်ခြည်း (သိုးဆောင်းစကားအရဆို emerge) ပေါ်ထွက်လာတတ်တယ်။
လော်ဘီလောက ဆိုတာ တစ်ဆုံးမက ကျယ်ပြန်လှပါတယ်..။
လော်လောကမှာ ဆရာတဆူဖြစ်ဖို့ လိုက်မီဖို့ ဆိုရင် ဖြတ်လမ်းက တစ်လမ်းဘဲ ရှိတယ်။ “ လျှာ “ကို ကောင်းကောင်းသုံးတတ်မှ ရမယ်။ သဘောက “လျှက်” ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။တချို့ လူသာငယ်တာ ။ လျှာကို သုံးလွန်းအားကြီးလို့ လျှာခင်တောင် ပြတ်မထွက် ဖြစ်နေပြီ။
အလုပ်ဖြစ်ဖို့ လျှာ ရင်းရပေမယ့် လော်ဆရာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း သေးတာ မဟုတ်ဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ အရပ်ပျက်ဒီမိုကရေစီအရေခြုံခေတ်က ဘဘကြီး နွားနို့လက်ထက်မှာ ဆိုရင် အိုဘားမားကို ဂျင်းထည့်ဖို့ အမေရိကန်လို့ နိုင်ငံကြီးကိုတောင် သွားပြီး လော်ဆရာ ငှားရတဲ့ အထိ လော်တခေတ်ဖြစ်ခဲ့သတဲ့..။
ဒီကတည်းက ဘဘကြီးတွေလည်း သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ပြည်ပအားကို ငမွေထိုး” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို အားနာပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မြန်မာနည်းမြန်မာဟန် ဒီမိုကရေစီကလုန်း လုပ်သလို လော်တက္ကသိုလ် ထောင်ပြီး မွေးမြူလိုက်တာ ခုဆို နယ်ပယ်အစုံစုံမှာ မြန်မာဖြစ် လော်ဆရာတွေ၊ လော်သရုပ် ဆောင် တွေ၊ လော်အဆိုတော်တွေ လော်ပညာရှင်တွေ၊ လော် နိုင်ငံရေးသမားတွေ အများကြီး မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။
ပြည်ပအားကိုးစရာမလိုဘဲ ပြည်တွင်းဖြစ် လော်မျိုးဆက်ကို မွေးထုတ်နိုင်ပြီလေ…
ကဲ…. အားရပါးရလော်လေပြီ။ လူမိုက်အဖွဲ့အားကိုးနဲ့ ….။
တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဘုရားတရားသာ တကြပေတော့…..။